Nhoroondo Kambani - Beulines Technology Co., Ltd.
Inowanikwa MuGuangzhou, BEULINES Inoshanda Mune Yekurapa Aesthetics Nzvimbo Ine Makore makumi maviri Uye Yakave Nesimba Kubatikana Mukugadzira, Kushambadzira Uye Kutengesa KwePamusoro Yemhando Aesthetics Mishonga Mishonga, Inosanganisira Hyaluronic Acid Dermal Filler, Botulinum Toxin Rudzi A, Mesotherapy Solution (Mafuta Kuderedza / Kuchenesa / Kukura Kwemvere / Anti Melano / Anti Kuchembera), PDO Thread, nezvimwe.
Zvichienderana nemakore mazhinji eindasitiri yekushandisa ruzivo uye nyanzvi-chikamu chekutsvagisa uye timu yekusimudzira, BEULINES inotarisira kupa chengetedzo uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye yakazara yakazara masevhisi kugutsa vatengi. Iine vashandi vanokwanisa, kirasi zviuru gumi GMP makamuri akachena uye epamusoro zvigadzirwa zvekugadzira, kambani inovimbisa kuenderera kugadzirwa kwemidziyo yezvokurapa uye zvigadzirwa zvejekiseni zvinodhaka zveClass III izvo zvinosimbisa kumitemo nemirau yeHurumende Chikafu neDrug Administration (CFDA) uye EU MDD.
BEULINES ine yekumhanyisa uye kutumira kunze zvikwanisiro uye yakapasa yepasi rose mhando chitupa senge CE, MDSAP, GMP, nezvimwe.
BEULINES inotsigira iyo pfungwa uye mweya weinoenderera mberi hunyanzvi, hwakavakirwa pasainzi, kugadzira chiratidzo chiri nani chevanhu, kubatsira vanhu kuva noutano, mufaro, uye kuwana hupenyu hwakazadzikiswa.
BEULINES vanotarisira kushanya kwako pamwe nekubatana.
-Inozvidavirira kune vese vatengi
kunyangwe vari vekunze vatengi kana vemukati vatengi, zvavanofarira uye kugutsikana ndizvo zvatinonyanya kunetsekana uye zvinangwa zvebasa.
-Inozvidavirira kune vese vashandi
kupa mubayiro zvinonzwisisika kune vashandi nemipiro yavo, vanoremekedza hunhu hwavo, chiremerera uye kuvanzika, vanokoshesa matarenda avo, vanopa simba zvizere, vanogadzira kugona kwavo, vanopa yakachengeteka uye yakashongedzwa nzvimbo yekushanda uye kudzidziswa kwakanaka nemikana yekusimudzira, Iva nebasa rekuvimbika kwekambani nekuita basa se hwaro hwekuongorora, kuita kwepamusoro uye kudzoka kwakakwirira.
kupa nzanga zvigadzirwa zvepamusoro-soro uye zvemhando yepamusoro, uye zvinobatsira kuchikonzero chehutano hwevanhu.
isu tinofanirwa kugadzira yakavhurika yemukati yekutaurirana mweya, kugadzira mutemo wakasarudzika uye usingachinji, kumisikidza mashandiro evanokwanisa uye vepakati, uye nekukudziridza timu inobatana uye inovavarira kune vese vashandi, usazomboti kukundwa, kuzvipikisa, uye kuteedzera kugona kweMweya ; kuenderera mberi nekutsvaga uye kusimudzira kwemapurojekiti matsva ekuzadzisa mutengo uye hutungamiriri hwehunyanzvi, kuti iyo kambani igare isingakundike.
Beulines yakagadzwa zviri pamutemo, yakatsaurirwa mune yezvokurapa aesthetics indasitiri.
Iyo yekurapa sodium hyaluronate gel yakawana chitupa cheEC.
Ino pfuura iyo iso13485-2016 nyowani yemhando yepamusoro chitupa.
Beulines kutengesa kwese nyika makumi maviri neshanu, yakawana yakanaka kiriniki mhedzisiro, hapana zvakakomba maitiro akashata kusvika zvino.
Iyo yakabudirira kupfuura ISO9001 / IS013485 yemhando system chitupa.
Guangzhou bazi reBeulines rakavambwa, rakawedzera bhizinesi rekutengesa kunze.
Yakapasa MDSAP certification yeBritish standard Institute (BSI).